Orthodontic Teeth Trainer Appliance Factory | China Orthodontic Teeth Trainer Appliance mpanamboatra, mpamatsy
Dental Orthodontic Alignment Teeth Trainer A2 Large / MRC Appliance A2 ho an'ny olon-dehibe ampiasaina / A2 Myobrace Dental Trainer Medium
Ny Dental Orthodontic Alignment Teeth Trainer A2 dia vita amin'ny polyurethane mafy orina, ary mety amin'ny malocclusion malemy. Ny akora mafy orina A2 dia natao hampiasaina aorian'ny A1, ary manome hery mifandrindra bebe kokoa amin'ny nify eo aloha.
Dental Myobrace K1 Mpitaiza nify lehibe / Dingana 1 fampifanarahana orthodontika fitaovana MRC Trainer K1
Dental Myobrace K1 mpanazatra nify dia rafitra fitaovana misy dingana telo natao manokana hanitsiana ny fahazaran-dratsy eo am-bava eo am-pitsaboana ireo olana eo amin'ny fampandrosoana ny valanorano ambony sy ambany. Ny K1 dia manome fanitsiana fahazarana ary vita amin'ny silipo malefaka mba hifanaraka amin'ny endrika areti-nify sy ny nify tsy mifanaraka tsara. Ny toetrany miovaova koa dia midika fa manolotra fitanana tsara kokoa ho an'ny fampiasana amin'ny alina izy.
Mpanazatra Orthodontic Dental Oral Appliance Trainer T4A Myobrace Manitsy Fomba Fahazaran-dratsy Ratsy T4A Teeth-Trainer ho an'ny mpangarom-bolo misokatra
Ny Dental Oral Appliance Trainer T4A dia mety indrindra amin'ireo marary 12 - 15 taona eo am-piandohan'ny fitsaboana nify maharitra. Ny T4A dia azo ampiasaina ho fitazonana myofunctional ho an'ireo marary izay tsy maniry hanana mpihazona fatotra maharitra mifatotra. Ilaina ihany koa izy amin'ny fitsaboana ireo tranga kely miverina tsy misy fametahana orthodontika raikitra, ary ho an'ny fampifanarahana tarehy nify kely.
Dental Appliance Myobrace A1 Teeth Trainer Brace Crowding Teeth Open Bite MRC A1 olon-dehibe Teeth Trainer
Ny Dental Appliance Alignment Trainer A1 no fitaovana malemy indrindra ao amin'ny rafitra Myobrace for Adults. Izy io dia fitaovana fanombohana mety hitsaboana ny fahazaran-dratsy tsy dia tsara loatra amin'ny toe-javatra izay mila fitaovana mora vidy kokoa noho ny hamaroan'ny olona, ​​na ny fampiononana ny marary.
Myobrace Trainer Teeth Orthodontic Appliance Dental Brace A3 Mahitsy Fahazarana Am-bava / Dental olon-dehibe A3 Alignment Trainer
Dental Orthodontic Alignment Trainer A3 dia rafitra fitaovana misy dingana telo natao manokana hanitsiana ny fahazaran-dratsy eo am-bava eo am-pitsaboana ireo olana eo amin'ny fampandrosoana ny valanorano ambony sy ambany. Ny A3 dia manome fampifanarahana sy fitanana farany. Ny fananganana polyurethane mafy orina dia manome fampifanarahana nify tsara sy fitazonana azy. Mametaka ny toeran'ny lela ny tagan'ny lela poakaty ary manatsara ny fanitsiana ny fahazarana. Ny A3 dia misy amin'ny mahazatra sy lehibe.